Minimal Options for Developers and Website Owners to DevelopaNew Static Website
Submitted by everlearner on Wed, 07/14/2010 - 16:05
၀က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ကြတဲ့အခါ ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း သဘာ၀နဲ့ လိုအပ်ချက် (Business Functions and Requirements) တွေအပေါ် မူတည်ပြီး အတွင်းမှာပါရှိတဲ့ အကြောင်းအရာ (Content) တွေ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်သွားကြပါတယ်။ ဥပမာ ပြောရရင် သတင်းဆောင်းပါးတွေ ရေးသားဖော်ပြလေ့ရှိတဲ့ Blog အသားပေး Web Site တစ်ခုမှာ ပါရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ အွန်လိုင်း အရောင်းဆိုင် (Online Shop) တစ်ခုမှာ ပါတဲ့ အကြောင်းအရာတွေဟာ တူမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခု ဝေမျှမယ့် အကြောင်းအရာတွေကတော့ ရိုးစင်းတဲ့ သာမန် Website တစ်ခုကို စရိတ်သက်သာစွာနဲ့ စိတ်ချရတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုအဖြစ် တည်ဆောက်လို့ရတဲ့ နည်းတွေပါ။
Read more about Minimal Options for Developers and Website Owners to DevelopaNew Static Website
Gmail တွင် ဖိုင်များကို အသုံးပြုနိုင်သည့် နည်းလမ်းငါးမျိုး -5Effective Ways To Use Attachments In Gmail
Submitted by everlearner on Tue, 06/22/2010 - 17:32
အီးမေးလ်သုံးသည့်အခါ အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့့်် ဖိုင်များကို (Attachment အဖြစ်) တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ ပေးပို့ ကြရသည်။ အများအားဖြင့် ဓါတ်ပုံများ (Photos)၊ တေးသီချင်း သို့မဟုတ် အသံဖိုင်များ (Audio)၊ ဗီဒီယို ဖိုင်များ (Videos)၊ စာရွက်စာတမ်းများ (Documents) ကို အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့လေ့ ရှိကြသည်။ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ ပေးပို့လိုက်သည့် အဆိုပါဖိုင်များကို လက်ခံ၊ ကြည့်ရှု၊ နားထောင်ကြသည်။ တခါတရံတွင် ဖိုင်များထဲမှ Attachment များကို ပြန်လည် ရှာဖွေကြရသည်။ အီးမေးလ်အသုံးပြုသည့် အခါ အချိန်တိုအတွင်း ထိရောက်လျှင်မြန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် Gmail တွင် ဖိုင်များကို ထိရောက်လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်သည့် နည်းလမ
Read more about Gmail တွင် ဖိုင်များကို အသုံးပြုနိုင်သည့် နည်းလမ်းငါးမျိုး -5Effective Ways To Use Attachments In Gmail
Source Control ဆိုတာဘာလဲ?
Submitted by ktulip on Sun, 06/20/2010 - 14:44
Developer တစ် ယောက် အနေနဲ့ Source Code Control (SCC) က နေ့စဉ်ဘ၀မှာ တော်တော်ကို အရေး ပါပါတယ်။ Developer တစ်ယောက်တည်း လုပ်ရတဲ့ project တွေမှာ code တွေကို တစ်ခြား developer တွေ နဲ့ share လုပ်စရာ မလိုလို့ Source Code Control (SCC) က မလိုအပ်ပေမယ့် team တစ်ခု အနေနဲ့ ( တနည်းအားဖြင့် အခြား developer အများကြီးနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး) Project တစ်ခုကို လုပ်ရတော့မယ် ဆိုရင်တော့ code တွေကို တခြ
Sub Version Control
Read more about Source Control ဆိုတာဘာလဲ?
Flushing the Buffer Early to Increase Web Site Speed
Submitted by everlearner on Sat, 05/29/2010 - 12:20
၀က်ဘ်ဆိုက်ကို သုံးနေသူများက စာမျက်နှာတစ်ခုကို Request လုပ်လိုက်တိုင်း Backend Server ဆီမှ HTML စာမျက်နှာတစ်ခု အဖြစ် ပြန်လည် ထုတ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် 200 မှ 500 မီလီစက္ကန့်အထိ အချိန်ပေးရသည်။ ထိုအချိန်တွင် Server မှာ အလွန်အလုပ်လုပ်နေရပြီး User ၏ အင်တာနက်ကြည့်ဆော့ဖ်၀ဲမှာလည်း ဆာဗာမှ ပြန်လည်ပေးပို့မည့် HTML Code များကို စောင့်ဆိုင်းနေရသည်။ တခါတရံ ဖြူဖွေးနေသည့် ပလာစာမျက်နှာတစ်ခုကို မြင်နေရပြီး ကြာမြင့်စွာ စောင့်နေရတတ်သည်။ အထူးသဖြင့် IE6 တွင် ပိုသိသာသည်။ ထိုအချိန်မျိုးမှာ User Experience ကို အလွန်ထိခိုက်စေသည်။
Read more about Flushing the Buffer Early to Increase Web Site Speed
Submitted by everlearner on Wed, 05/26/2010 - 15:06
ပြဿနာတစ်ခုကို ပြေလည်စေရန် ဖြေရှင်းရခြင်းသည် နည်းပညာနှင့် အတွေ့အကြုံတို့ကို တစ်ဝက်စီ ပေါင်းစပ်အသုံးပြု ဖြေရှင်းရသော လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်စေ ယခုမှ စတင်၍ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သူဖြစ်စေ ပြဿနာတစ်ခုကို စနစ်တကျ ချဉ်းကပ် ဖြေရှင်းတတ်ရန် အထူး အရေးကြီးပါသည်။
ကွန်ပျုူတာတစ်လုံး၊ ကွန်ရက်တစ်ခု သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုအတွက် ပြဿနာတစ်ရပ်ကို ရှင်းရသည့်အချိန်တိုင်း အသုံးပြုနိုင်သည့် အခြေခံနည်းလမ်း နှစ်ခုရှိသည်။ အကောင်းမြင်အခြေပြု ဖြေရှင်းနည်း (Optimistic way ) နှင့် အဆိုးမြင်အခြေပြု ဖြေရှင်းနည်း (Pessimistic way) တို့ ဖြစ်သည်။ သူ့နည်းနှင့်သူ ကောင်းသောအချက်များ ရှိသည်။
Read more about Solving Systems Problems with or without Experiences - ပြဿနာ ဖြေရှင်းနည်း စနစ်များ
Making Ajax Cacheable to Increase Web Site Speed
Submitted by everlearner on Mon, 05/10/2010 - 14:53
အဓိက အကြောင်းအရာ - Content
Read more about Making Ajax Cacheable to Increase Web Site Speed
Submitted by everlearner on Mon, 05/03/2010 - 17:16
အဓိက အကြောင်းအရာ - server
ETag ဆိုသည်မှာ - အင်တာနက်ကြည့်ဆော့ဖ်၀ဲ၏ ခေတ္တသိုလှောင်ခန်း (Browser's Cache) အတွင်း သိမ်းဆည်းထားသည့် ၀က်ဘ်ဆိုက် (Web site) တစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ထိုအစိတ်အပိုင်းများ၏ မူလ ဆာဗာ (Original Server) တို့ကြားတွင် ကိုက်ညီ မှန်ကန်မှု ရှိမရှိ မှန်ကန်စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် - ၀က်ဘ်ဆာဗာ (Web Server) များနှင့် အင်တာနက်ကြည့်ဆော့ဖ်၀ဲများ (Web Browsers) ကြားတွင်၊ အသုံးပြုသည့် နည်းစနစ် - တစ်ခုဖြစ်သည်။
Read more about Configure/Remove ETags to Improve Website Performance
Submitted by everlearner on Sun, 05/02/2010 - 09:42
ကွန်ပျူတာစနစ် သို့မဟုတ် ကွန်ရက်တစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်ခြင်း၊ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပြဿနာများကို အဖြေရှာ ရှင်းလင်းခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ရသည်မှာ သိပ္ပံပညာရပ်များ ပေါင်းစပ်ဆက်နွယ်နေသည့် အနုပညာတစ်ရပ် ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ မှန်ကန်သော နည်းလမ်းများကို စနစ်တကျ အသုံးပြုနိုင်မည်ဆိုပါက ပြဿနာရှိနေသည့် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို ဖြစ်စေ၊ ကွန်ရက် တစ်ခုလုံးကို ဖြစ်စေ စိစစ်၊ အဖြေရှာ ရှင်းလင်းနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
Read more about Introduction to System Administration & Troubleshooting - စနစ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပြဿနာရှင်းလင်းခြင်း - နိဒါန်း